Uma ubeka isipho emaphaketheni ezimibalabala, lena uqinisekile ukukhaphela isipho sakho okunethezeka. Ngakho, uphawu elula kungenzeka sikhumbuleke futhi engcono emkhosini. Cabanga ngezindlela eziningi okulula indlela bopha isipho:
1. Yethula a amafomu eyinqaba zidinga emaphaketheni ekhethekile, ngakho-ke ukukunikeza iphakheji ngesimo esikhwameni isipho. Kungaba ngcono ukwenza okwanele indwangu ethambile noma ezinemibala wazizwa ephepheni. Thatha ilungelo usayizi impahla kuyiphi isikhwama, bese ugoba etafuleni. Ngo phakathi impahla ukubeka isipho sakho kanye balugicite esizidingayo, ezifana roll. Kufanele uthole "amasosishi" ngesipho, ephakathi nendawo futhi emaphethelweni impahla ngeke sibe nalutho. Manje phinda kubo maqondana nomunye futhi uwabophe eneribhoni ezimibalabala, ukuze uthole umnsalo. Fan isikhwama umsila. Manje uyazi ukuthi ukusonga isipho ukuma eyinqaba.
2. Kunabantu nje abakwazi ukuphila ngaphandle itiye ezinhle, futhi kulokhu, isipho esihle kungaba eqolo itiye isiphuzo. Cishe, isipho okunjalo kuyoba ebhokisini sikwele, ngakho sidinga emaphaketheni ezimibalabala itiye ngomnsalo elikhanyayo ngesimo Aster imbali. Ukuze wenze lokhu, thatha futhi izinhlobo ezimbili zezinkantolo ezimibalabala elihambisanayo, isibonelo, red yellow. Beka abomvu phezu kwetafula bese ukubeka isipho phakathi. Manje mpahla iphepha alengayo kwesinye kanti olunye uhlangothi ukuze uthole umsila omude phezulu, bese udonsa iyiphi intambo eziqinile (hhayi kamuva ukubonwa intando yakhe). Khona-ke sithatha leli phepha oluhlaza futhi bopha kuphela zombili ezibhekene, futhi isivumelwane intambo. Lokhu kulandelwa fluff tail futhi sokuyiphungula bevela kuzo zonke izinhlangothi, njengoba otshanini ukusikiwa. Ngenxa yalokho, kufanele uthole Aster imbali-like. Khona-ke ngasesinqeni tie iribhoni segolide. Konke kwenziwe! Kule ndlela elula ingasetshenziswa ukugoqa yiliphi ibhokisi ngesipho.
3. Kukhona enye indlela ejwayelekile ye indlela bopha isipho ebhokisini. Ukuze wenze lokhu, ungathatha ucwecwe noma ephepheni ezinemibala ngoba asemaphaketheni izipho. Ake ukhethe iphepha: akufanele kube Friend too, kodwa okugqamile. It ukubeka ibhokisi bese unquma ukuthi iziphi ucezu impahla sidinga. Kufanele kuqashelwe ukuthi ebhokisini etholakala maphakathi emaphethelweni ezibanzi kufanele amboze Butt wakhe ku 3/4 futhi 2/3 ezihambisanayo.
Uma isiqeshana wayefisa nto ukusika, ukuze agobe imiphetho nxazonke noma ingaba isentimitha nje futhi lezo kubo tape kabili emaceleni. Manje faka isipho phakathi bese mpahla izinhlangothi ezibanzi iphepha anamatheliswe komunye nomunye. Okulandelayo, qinisa kuphelile. Kunzima ukukwenza. Vele ngobumnene ukugoqa ophumile semikhawulweni iphepha ngaphakathi, efana iphasela zihambisana. Ikakhulukazi ngoba tape kabili emaceleni wanamathela lula umsebenzi. Isipho sisongiwe futhi manje kudingeka ukuhlobisa umnsalo aluhlaza.
4. Thatha noma iyiphi strip enhle ebanzi iphepha bese wenza skein of ematfuba eziyisishiyagalombili. Ngemva aba, futhi bheka nobude ikhoyili kwaba kancane esingaphansi ububanzi ibhokisi. Ngaphezu kwalokho, ububanzi ikhoyili esiyisicaba phakathi lasavele usebenzisa Imi nge sikelo kanye tie iribhoni elihle elincane. Manje skein yethu sasifana sibalo eziyisishiyagalombili. Thatha futhi aguqa likhiphe izingqimba eziningana itheyiphu phakathi ukuze izingcezu oyindilinga babe phezulu. Ngemva kwalokho, thina athathe ngabunye ukusuka maphakathi emugqeni bese nice isipho iribhoni, okuyinto kuphinwe ibhokisi nge pin ezincane ezingabonakali.
Manje uyazi izinhlobo ezinkulu isipho kwemibhalo, futhi sethemba ukuthi le nkinga kanjani ukuze ugoqe isipho esikhathini esizayo ngeke aphazamise nawe, futhi uzokwazi ngaphandle kobunzima ukuba sibhekane nale umsebenzi wemfanelo.